Xerada qaxootiga Al-kharas oo xayiraad lagu soo rogay
Xerada Qaxootiga Al-Kharas
Maleeshiyo qabiil ayaa xayiraad dadban ku soo rogay Xerada Al-kharas ee dalka Yemen oo ay ku jiraan qaxooti Soomaali ah.
Xayiraadan ayaa ka dhalatay muran iyo dhibaato ka dhexjira beesha iska leh deegaanka xeradu ku taallo iyo dowladda hoose ee halkaasi ka talisa. Muddadaasi 4ta maalmood ku siman ma jirin wax gaadiid ah oo kasoo baxay amaba galay xerada Alkharaz ee iyadu 180 km dhinaca galbeed ka xigta magaalada Cadan,iyadoo nolosha xeradaasina ay si toos ah ugu xiran tahay magaalooyinka ku xeeran oo ay Cadani kow ka tahay.
Al-kharas waxaa ku jira 12 kun oo qaxooti Soomaaliyeed ah.
Gaadiidka soo gala kana baxa xerada iyo tuulooyinka ku dhawba waxaa lacago aan sharciga waafaqsaneyn ka qaadan jiray dabley ku abtirsata qabiilka halkaasi ku badan,laakiin waxaa amar lacahagaasi lagu mamnuucayo soo saaray dowladda hoose ee gobolka Laxaj ee ay xeradu hoostagto, iyagoo tallaabadaasi ka biyo-diidayana waxa ay gabi ahaanba mamnuuceen in wax gaadiid ahi ay soo galaan amaba ay ka baxaan dhulka ay iyagu ku badan yihiin oo ay xeraduna kamid tahay.
Ganacsiga yar-yar oo ay khudradda iyo waxyaabaha quutul-saruuriga ahi u badan yihiin waxa ay si maalinle ah dadka xerada ku nooli uga heli jireen magaalooyinka, waxaana intaasi sii dheer tobanaan kamid ah dhallinyarada xerada ku dhaqan oo usoo shaqo tagi jiray magaalooyinka si ay quutul-daruurigooda ugala soo baxaan ,kuwaasoo hadda u muuqda in la saaray cuna-qabateyn aanay iyagu sababsan .
Dhibaatadan ayaa Soomaalida qaxootiga ku ah xerada al-kharaz waxa ay kusii kordhisay qiil hor leh ,iyagooba markoodii hore ka cabanayay musuq-maasuq iyo raashiinka ay qaataan oo haddiiba ay helaan ah mid aan qof noole ah ku filneyn sida ay ku warrameen qaar katirsan dadka xeradaasi ku dhaqan.
Inkastoo ay muddo 4 maalmood ahi xayiraad dul-taallo kumanaan ruux oo qaxooti ah haddana majiraan tallaabooyin iyo dhaq-dhaqaaq muuqda oo looga gol-leeyahay in dhibaatadaasi lagu soo af-jaro oo ay waddo dowladda Yemen amaba hey’adda UNHCR ee iyadu xeradaasi maamusha.
Warbixinta weriyaha VOA Sanca Jacfar Kuukaay qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso.
Warbixinta Jacfar Kuukaay